Dagaal culus oo ka dhacay Jubbada Hoose iyo xubno Shabaab ah oo lagu dilay, Sawirro – Hornafrik Media Network
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo ballaaran oo weli ciidamada Kumaandooska Soomaaliya, gaar ahaan qeybta 5-aad ee guutada 16-aad ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Howlgallada ayaa xoogoodu ciidamada waxa ay ka fuliyeen agagaarka degmada Kamsuuma, halkaas oo ay ku xoogan yihiin dagaalamayasha Al-Shabaab.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadu dagaallo ay kala kulmeen dhanka Al-Shabaab, islamarkaana uu jiro khasaare kala duwan.
Taliyaha ururka 5-aad ee guutada 16-aad ciidanka Kumaandooska Soomaaliya, Xasan Aadan Maxamed (Xasan Ciraaqi) oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyey howlgalladaasi iyo u jeedkooda, isagoo tilmaamay inay khasaare gaarsiiyeen Al-Shabaab.
Ciraaqi ayaa sheegay inay toogasho ku dileen ugu yaraan 12 ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana ay dhawaceen tiro kale, kadib dagaal ay la galeen.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamadu ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanada Malaayleey, Janaale gaay, Reerneeroow, Bandar Jadiid iyodegaanka Bengaani, oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in jeedka dhaq dhaqaaqyadaan uu yahay sidii Al-Shabaab looga saari deegaanada gobolkaas, isla markaana ay sii wadi doonaan.
Dhinaca kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaas iyo dagaallada ay la galeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa weli kacsan, waxaana saakay dhaq dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo deegaano iyo degmooyin ka kala tirsan gobollada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya.
Danab Howlgal Ciidanka Xooga Dalka Dagaal
Howlgal Ciidanka Xooga Dalka Dagaal
Howlgal Danab 1
Howlgal Danab 2 696×392 1